Momba anay - Orange Family Technology (Tianjin) Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2014, Orange Family Technology (Tianjin) Co., Ltd dia mirotsaka lalina amin'ny fitantanana ny fahasalamana amin'ny aretina mitaiza sy ny fanafody fisorohana ary manana ny marika ivelantsika — MEDORANGER. Ny orinasa dia manome serivisy mifototra amin'ny angon-drakitra lehibe momba ny fahasalamana sy ny "fitaovana fitsaboana azo alefa + ny sehatra rahona lavitra", mahatsapa ny fifandraisana an-tserasera sy ivelan'ny Internet, manohana ny fizotran'ny vahaolana amin'ny indostria miaraka amin'ny teknolojia ara-pitsaboana azo entina ary farany mamorona serivisy mihidy mihidy amin'ny fitantanana fitsaboana ara-pahasalamana nomerika . Orange Family dia manolo-tena hampiroborobo ny fianakaviana sy ny famolavolana ny fitantanana ny fahasalamana mitaiza aretina, nahazo zon'ny mpamorona rindrambaiko maherin'ny 60 sy patanty ary lasa orinasa teknolojia avo lenta any Tianjin sy Sina.
Tiavo ny lalana
Hevitra momba ny toe-tsaina
Mamorona ho an'ny filan'ny fahasalamana
Ataovy tonga saina ny mpiasa tsirairay fa misy vidiny
Hevitry ny rafitra fitantanana
Mikatsaka ny firindran'ny fiainana isika
Orinasa Orange Family dia voasoratra ara-panjakana ary naorina, ary namoaka ny fitaovana fitsaboana azo ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana voalohany - snoring monitor wrist watch CMS50F.
Ny praiminisitry ny filankevi-panjakana Li Keqiang dia nitsidika ny Internet Venture Cafe izay misy ilay orinasa, ary nanamafy tanteraka ny vokatra sy ny foto-kevitr'ilay orinasa, ary nandrisika ny orinasa hiaraka hiaraka amin'ny fanavaozana, ny fandraharahana ary ny famoronana.
Ny orinasa Orange Family dia tian'ny Honghui Capital, tahirim-bola fampiasam-bola matihanina amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny fahasalamana, ary nahazo $ 5 tapitrisa dolara tamin'ny famatsiam-bola Series A, nanararaotra izany fotoana izany handrosoana bebe kokoa amin'ny sehatry ny fitsaboana finday.
Tao amin'ny Fifaninanana Horse Dark, ny orinasa fampiroboroboana farany havaozina an'i Shina amin'ny famatsiam-bola sy famatsiam-bola, Orange Family dia nahazo ny 50 voalohany tamin'ny taona.
Orange Family no laharana 10 voalohany tamin'ny Fifaninanana China Innovation and Entreprisinance faha-4 ary nahazo ny mari-pankasitrahana Outside Enterprise tamin'ny famaranana.
Amin'ny maha orinasa solontena tokana azy ao Tianjin, Oranger Family dia voafidy ho iray amin'ireo orinasa 100 manandanja indrindra amin'ny indostria "Internet +" IDC Shina.
Taorian'ny fanamarinana ny "Tianjin High-tech Enterprise", Oranger Family dia nanjary "Enterprise High-tech Enterprise".
Nahatratra fiaraha-miasa stratejika niaraka tamin'i Philips, marika mpamantatra rivotra manerantany.
Vita ny famatsiam-bola Series B mitentina 70 tapitrisa RMB.
Niorina ny "foibem-pitantanana aretina mitaiza lava".
Nosafidian'i Hurun Report- "Orinasa kintana ambony indrindra miakatra 100 any Sina izay manana sandam-bola be indrindra".
Philips dia nanambola tao amin'ny Oranger Family, nanomboka ny fitantanana ny sleep sleep apnea ary ny fandaminana ny ekosistia ho an'ny fahasalamana manokana.
Nahazo RMB am-polony tapitrisa RMB amin'ny famatsiam-bola Series B + ny Orange Family, tarihin'i Philips, arahin'i Chongshan Capital.
Miantehitra amin'ny toerany lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria sy ny fahaizany manavao, Oranger Family dia nomena mari-boninahitra "Top 50 of TEDA Technology in Tianjin Development Zone in 2017".
Ny Orange Family dia nanampy tamin'ny famitana ny diagnostika na ny grady nasionaly tamin'ny aretina pulmonary obstructive ary ny fampiroboroboana natao tamin'ny dingana voalohany tamin'ny tetik'asa "Happy Breathing", manome andrim-pitsaboana maherin'ny 1.800 miaraka amina programa voamarina ho an'ny fizahana ny havokavoka sy ny fanofanana mahazatra.
Mifantoka amin'ny torimaso torimaso sy ny fananganana hery marika, Oranger Family dia nahazo ny mari-pankasitrahana indrindra ho an'ny marika 100 an'ny ankamaroan'ny olona miambina indrindra amin'ny Arterial Network's Future Medical in 2018.
Gazelle Enterprise an'ny siansa sy ny teknolojia any Tianjin sy ny faritra fampandrosoana amin'ny taona 2019.
Ekena ho orinasa mitarika haitao any Tianjin.
Nahazo ny TOP100 amin'ny lisitry ny fitaovana fanavaozana an'i Sina ao amin'ny Medical Future ho an'ny Network Arterial amin'ny 2019.
Masinina Icu Ventilator, Mora ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny tosidra, Fanaraha-maso ny tosidra amin'ny fo, Fanaraha-maso ny tosidra, Fanaraha-maso ny tosidra amin'ny zaza, Fanaraha-maso ny tosidra tsy tapaka,